စစ်စခန်းနှစ်ခုကို ထိန်းသိမ်းရေး ယာယီစခန်းအဖြစ် အသုံးချမယ်
စစ်စခန်းနှစ်ခုကို ထိန်းသိမ်းရေး ယာယီစခန်းအဖြစ် အသု...
26 มิ.ย. 2561 - 08:33 น.
လူ၀င်မှု အရာရှိက တရားမဝင် ၀င်လာသူတွေကို စစ်ဆေး
အမေရိကန်မှာ တက္ကဆက်ပြည်နယ်က စစ်စခန်းနှစ်ခုကို နိုင်ငံတွင်း တရားမဝင် ရောက်လာသူတွေကို ထိန်းသိမ်းထားမယ့် ယာယီစခန်းအဖြစ် အသုံးချမယ်လို့ ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီး Jim Mattis က အတည်ပြု ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
မက္ကဆီကို နယ်စပ်က ခိုး၀င်လာသူတွေကိုဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းတဲ့အခါ မိဘနဲ့ ကလေးတွေ ခွဲထားတာ ရပ်ဖို့ သမ္မတထရမ့်ဆုံးဖြတ်ချက် ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးနောက် အခုလို စစ်စခန်းနှစ်ခု အသုံးပြုဖို့ ပြောလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။
မိဘနဲ့ ကလေး ခွဲမပစ်ဖို့ ထရမ့် အမိန့်ပေး
ထရမ့် ဗီဇာကန့်သတ်မှု တရားသူကြီး ဟန့်တား
El Paso က Fort Bliss လေတပ်စခန်းနဲ့ San Angelo က Goodfellow စခန်းတွေမှာ ခိုး၀င်လာသူတွေကို ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းထားဖို့ ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ မစ္စတာ မက်တစ်စ် က ပြောပါတယ်။
ဒီလုပ်ဆောင်ချက်ဟာ နိုင်ငံရေးထက် ပြည်ထဲရေးဌာနကို ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး ဆိုင်ရာ အကူအညီပေးမှုသာ ဖြစ်တယ်လို့လည်း သူက ဆိုပါတယ်။
ထိန်းသိမ်းရေး စခန်းတွေမှာ မိဘနဲ့ ကလေး ခွဲထားတာ ရပ်လိုက်ပြီ
အမေရိကန် ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီး ဂျင်မ်မက်တစ်စ် က စစ်အခြေစိုက်စခန်း နှစ်ခု ကို အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု ထဲ တရားမဝင် ခိုးဝင်လာသူတွေ ကို ယာယီ ထိန်းသိမ်ရေး စခန်း အဖြစ် ထားမဲ့ အကြောင်း ထားမဲ့ အကြောင်း အလာစကာ ပြည်နယ်ကို ရောက်ခိုက် ပြောဆိုပါတယ်။
Goodfellow လေတပ်စခန်း နဲ့ Fort Bliss စခန်းတို့ ဖြစ်ပေမဲ့ ဘယ်ပုံစံ နဲ့ ဒီစခန်းတွေ အသုံးပြုကြမယ် ဆိုတာတော့ အတည်မပြုနိုင်သေးဘဲ ပြည်ထဲရေး ဌာန က တာဝန်ယူ ထိန်းသိမ်းမှာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် ကာကွယ်ရေး ငှာနက လိုအပ်တဲ့ အကူအညီ ပဲ ထောက်ပံ့ပေးမှာပါ လို့ မစ္စတာ မက်တစ်စ် က ဆိုပါတယ်။
သဘောကတော့ ပင်တာဂွန် စစ်ဌာနချုပ် အနေနဲ့ တာဝန်ယူ ထိန်းသိမ်းမှာ မဟုတ်ဘူး လို့ ပြောတာ ဖြစ်ပြီး ဒီ စခန်းတွေ ကိုလည်း ဇူလိုင်လ အစောဆုံး အသင့်ဖြစ်အောင် စီစဉ် နေပါပြီ။
ကျန်းမာရေး နဲ့ လူမှုဝန်ဆောင်မှု ဌာန က အရာရှိ တွေ ကတော့ တက်ဆက် ပြည်နယ်ရှိ ထိန်းသိမ်းရေး စခန်း သုံးခု ကို ပြီးခဲ့တဲ့ သီတင်းပတ် က သွားရောက် စစ်ဆေးပြီး ကလေးတွေ ထားဖို့ သုံး လို့ ရမရ လေ့လာ ခဲ့ကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
သမ္မတ ထရမ့်ကတော့ အမေရိကန် ကို တရားမဝင် ဝင်လာသူတွေ ကို နယ်စပ်ကနေ ဝင်လာခွင့် မပေးနိုင်ဘူး ဆိုတာကို တိတိလင်းလင်း အသိပေးတဲ့ အကြောင်း၊ ဒီကိစ္စ ကို ရှုပ်ထွေးရှည်လျားတဲ့ ဥပဒေ ကြောင်းအရ အချိန်ကုန် ငွေကုန်ခံ လုပ်မနေနိုင်တဲ့ အကြောင်းတွေ သူ့ရဲ့ တွစ်တာ မှာ ရေးထားပါတယ်။
ဒါ့အပြင် သူရဲ့ မူလ အစီအစဉ် အရ မိုင်ပေါင်း နှစ်ထောင်နီးပါး ရှိတဲ့ အမေရိကန် မက္ကစီကို နယ်စပ် ကိုလည်း တံတိုင်းဆောက်မဲ့ အစီအစဉ်နဲ့ ကယ်လီဖိုးနီးယား၊ အရီဇိုးနား၊ နယူး မက္ကစီကို နဲ့ တက်ဆက် ပြည်နယ် ဘက် က မိုင် ခြောက်ရာ ငါးဆယ်ကျော် နယ်စပ် ဘက်မှာလည်း နည်းမျိုးစုံ နဲ့ တာတိုင်း ကာရံမဲ့ အကြောင်းတွေ သမ္မတ ထရမ့် က အသိပေးထားခဲ့ပါတယ်။
อัลบั้มภาพ စစ်စခန်းနှစ်ခုကို ထိန်းသိမ်းရေး ယာယီစခန်းအဖြစ် အသုံးချမယ်